Mofon’aina – TALATA 25 APRILY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 25 APRILY 2017
25 aprily 2017
21 Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin’ ny fanorenan’ ny tany?22 Izy no mipetraka amin’ ny habakabaka ambonin’ ny tany, ary ny mponina etỳ dia tahaka ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka ny lay hitoerana;23 Izy no mahatsinontsinona ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin’ ny tany ho tahaka ny zava-poana.24 Vao nambolena vetivety ireo, vao nafafy ireo, vao namaka tao amin’ ny tany ny fotony, dia notsofin’ Andriamanitra ireo, ka dia nalazo, ary nindaosin’ ny tafio-drivotra tahaka ny vodivary izy.25 Koa ampitovinareo amin’ iza moa Aho, hitahako aminy? Hoy ny Iray Masina.26 Asandrato ny masonareo, ka mijere; Iza no nahary ireny? Izy no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin’ ny anarany avy noho ny haben’ ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toha, ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza.
ISAIA 40 :21-26
ANDRIAMANITRA MPAHARY ANDRIAMANITRA
1-Mpahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra
Miverina indray ny fanambarana amin’ ny maha- mpahary an’ Andriamanitra (and26). Ao anatin’ny tantaran’Israely babo tany Babylona dia manambara ny maha- Mpahary Azy ny Tompo. Izany dia entiny manambara fa amin’ny fahariana no hamonjeny ny babo. Izy no mpahary ny lanitra sy ny habakabaka. Izy no manome ny olona tany onenana. Ny Tompo no manome ny mpanjaka sy ny mpitsara fahefana sady manala izany koa (and 23-24). An’ Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra sy ny fahefana ary ny hita maso sy ny tsy hita. Ao amin’ny fahariana ny Tompo no mahary ny famonjena ho an’ny vahoakany. Ampy hamonjena izao tontolo izao sy ny vahokany ny heriny sy ny fahefany. Tsy mka saina amin’ny olona izy amin’ny famonjena ny olombelona mpanota, fa Izy ihany dia mahavita izany.
Tsy misy azo ampitoviana amin’ Andriamanitry ny Israely. Mpahary Izy , mpamonjy ary masina Izy . Tompon’ny hery rehetra sy ny fahalalana ary ny fotoana sy ny toerana rehetra Izy. Azy ny tanjaka sy ny hery tsy toha ka tsy misy afaka hisakana ny sitrapony. Andriamanitra dia tsy manana hadisoana na kilema (and 26). Masina ny Tompo, ka nifidy ny Israely hametrahany ny anarany sy hanaovany fanekena. Tiany ho masina ny fiangonana mba ho azzy tanteraka. I Jesoa Kristy dia mitoetra eo amin’ny mino hanamasinany azy.
Inona no asan’ Andriamanitra mba hanamasinany antsika ?
Mofon'aina - ZOMA 21…
Mofon'aina - ALAROBIA 26…